Aurora Borealis na Denmark | Njem zuru oke
Aurora Borealis na Denmark
La Ugwu Ugwu na Denmark ọ bụ ihe ngosi ebumpụta ụwa nke na-adọta ọtụtụ puku ndị ọbịa kwa afọ. Ọmarịcha ọkụ ọkụ na-ekpuchi elu igwe ya bụ otu ihe a pụrụ ịhụ na mba Scandinavia ndị ọzọ dịka Norway, Sweden ma ọ bụ Finland. Otú ọ dị, ọtụtụ kwenyere na ọkụ ndị a pụrụ ịhụ na mbara igwe Denmark mara mma karịsịa.
Otú ọ dị, a naghị ahụ ihe ebube a kwa ụbọchị. A na-ahụkarị ọkụ ugwu na Denmark na oge ụfọdụ n'afọ ma ọbụnadị kwa ụbọchị, dịka ọhụụ ha dabere. Y’oburu n’inwe obi uto igha Denmark ma nwee obi uto ihe ebube a, iga agha n’ile ka gi ghara ichefu.
1 Kedu ihe bụ Northern Light?
2 Mgbe ị ga-ahụ Ugwu Ugwu na Denmark?
3 Ebe a ga - ahụ maka ugwu ugwu na Denmark
4 Esi ese Northern Lights
Kedu ihe bụ Northern Light?
Aurora borealis (nke a na-akpọkwa polar aurora) bụ ihe ikuku pụrụ iche nke na-egosipụta onwe ya n'ụdị nchapu ma ọ bụ ọkụ na mbara igwe n'abalị. N’ebe ndịda ugwu a maara ya dịka mpaghara ndịda aurora.
N’oge ochie, a kwenyere na ọkụ ndị a dị omimi n’enwe sitere na Chi. Dịka ọmụmaatụ, na China, a maara ha dịka "dragons nke igwe." Naanị site na narị afọ nke iri na asaa malitere ịmụ ihe site na echiche sayensị. Anyị ji ụgwọ ugbu a "aurora borealis" n'aka onye France na-enyocha mbara igwe Pierre Gassendi. Otu narị afọ mgbe nke ahụ gasịrị, onye mbụ jikọrọ ihe ahụ na ndọta ụwa bụ ndị Britain Edmund halley (otu onye gbakọọ orbit nke comet Halley).
Ugwu Ugwu na Denmark
Taa, anyị maara na Northern ọkụ na-erukwa mgbe ejection nke ebubo anyanwụ ahụ na-adachi na magnetosphere nke ,wa, ụdị ọta nke gbara ụwa gburugburu n'ụdị nke magnetik site na mkpanaka abụọ ahụ. Nkukota n'etiti ikuku gas na ikuku nke nwere ihe sitere na anwu anwu na-eme ka ha wepu ike ma weputa ìhè. Nke a na-emepụta vibrant shades nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, pink, acha anụnụ anụnụ na-acha odo odo agba egwú na mbara igwe "Okuku" a na-eme n'ebe dị elu site na 100 ruo 500 kilomita n'elu elu ụwa.
Mgbe ị ga-ahụ Ugwu Ugwu na Denmark?
Ọ bụ ezie na ha na-eme n’afọ ọ bụla, a na-ahụkarị Ọkụ Ugwu n’oge ụfọdụ. Oge kacha mma iji hụ Northern ọkụ na Denmark bụ n’agbata ọnwa Eprel na Septemba. N’oge a n’afọ, oge mgbụsị akwụkwọ dị n’ebe ugwu ụwa, ehihie na abalị na-agba ọchịchịrị ma igwe anaghị achakarị.
Na mgbede na mgbe anyanwụ dara bụ mgbe ọkụ ọkụ ndị a na-amalite ịpụta. Ugwu Northern (nke ndị Denmark maara dị ka Nordlys) juru ndị ala ọzọ anya, ọkachasị ndị sitere na latitude ndị ọzọ ma ha ahụbeghị ihe a mbụ.
N'ụzọ dị mwute, na ụbọchị nke oké ifufe ma ọ bụ mgbe ụtụtụ Mọnde ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịhụ anwansi nke ọkụ ugwu. Ọ bụrụ na oké ifufe na-efe, ị gaghị enwe ike ịhụ Ugwu Ndị Dị n’Ebe Ugwu, ebe ọ bụ na mbara igwe na-enwusi ike ka agba ya ghara igosi mmadụ nke ọma.
Na nke na-esote Oge nbudata vidiyo, eserese na Limfjord Na 2019, ị nwere ike ịghọta ekele zuru oke nke ihe ngosi a sitere n'okike:
Ebe a ga - ahụ maka ugwu ugwu na Denmark
Ndị a bụ ụfọdụ ebe kachasị mma iji hụ Northern Lights na Denmark:
Agwaetiti Faroe. N'ime agwaetiti a nke dị n'agbata North Atlantic na Osimiri Norwegian, enweghi obere mmetọ ọ bụla, nke bụ nkwa nke mbara igwe doro anya ma doo anya iji tụgharịa uche na Northern Lights na njupụta ya.
Grenen Enye edi ekpri peninsula emi odude ke ata edem edere edere Denmark. Na mgbakwunye na ohere, ihe na-eme ka ebe a bụrụ ebe ọhụụ dị mma bụ na enweghị ọkụ si n'aka mmadụ.
Kjul Strand, ogologo osimiri dị na mpụga obodo Ndị Hirtshals, site na ebe ọtụtụ ụgbọ mmiri na-aga Norway.
Samsø, agwaetiti dị n'ebe ọdịda anyanwụ nke Copenhagen na ama maka gburugburu ebe obibi ya nke ọma. Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma mpaghara okike nke Denmark.
Esi ese Northern Lights
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nke na-agba àmà aurora borealis na Denmark na-anwa ijide ịma mma nke ihe ahụ site na iji foto ma ọ bụ vidiyo vidiyo ha, na-ewepụta anwansi ya ruo mgbe ebighị ebi.
Ka e wee debanye ihe oyiyi ahụ n'ụzọ ziri ezi, ọ dị mkpa jiri ogologo ọnọdụ ikpughe. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mkpuchi kamera ga-adị ogologo oge (sekọnd 10 ma ọ bụ karịa), wee si otú a na-ahapụkwu ọkụ.
Ọ dịkwa mkpa jiri tripod iji hụ na nkwụsi ike nke igwefoto n'oge oge ikpughe.
N'agbanyeghị ihe niile, n'agbanyeghị agbanyeghị vidiyo na foto ndị ahụ, ọ nweghị ihe a ga-eji tụnyere mmetụta nke ikiri ọkụ ọkụ nke ọkụ ugwu nke na-efegharị site na mbara igwe, n'isi anyị. Ahụmịhe kwesịrị ịnwe obi ụtọ ma ọ dịkarịa ala otu oge na ndụ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Aurora Borealis na Denmark
Ationgbọ njem na United States
Tudor biliri, ifuru mba England